बाथरुममा राखेको एक कचौरा नुनले, यसरी बदलनेछ तपाईको भाग्य ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बाथरुममा राखेको एक कचौरा नुनले, यसरी बदलनेछ तपाईको भाग्य !
नुनको ठूलो महत्व छ हाम्रो जीवनमा । नुन मात्र भएन भने भान्सा चल्न सक्दैन । नुनले खानाको स्वाद बढाउन मात्र होइन तपाइँको भाग्य पनि चम्काउन सक्छ भन्ने चाँहि थाह नहुन सक्छ ।
नुनको प्रयोगसहित गरिने केही उपायले घरका सदस्यको सोँच नै सकारात्मक हुन्छ । नुनले खानाको स्वाद मात्र बढाउने होइन यसले बास्तु दोष पनि कटाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
बास्तु शास्त्रमा जीवनलाई सुखी र समृद्धशाली बनाउने अचूक उपायहरुको उल्लेख गरिएको छ । तपाइँको घरमा बास्तुदोष छ भने त्यसको उपचार केवल केही कचौरा नुनले गर्न सकिन्छ ।
तर यस्तो नुन भने समुन्द्री नून नै हुनु पर्छ । बाथरुममा केही कचौरा नून राख्नुस् तपाइँको घरमा रहेको बास्तु दोष मेटिन्छ । तर हरेक महिना कचौरामा रहेको नुन परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
नुनमा यस्तो अदभुत शक्ति हुन्छ जसले त्यस्ता नकारात्मक शक्ति नष्ट गरिदिन्छ । त्यसका साथै घरको दरिद्रता नष्ट हुने र लक्ष्मी प्रशन्न हुने समेत बास्तु शास्त्रको दावी छ । बाथरुममा नून राख्दा असफलताको अन्त्य हुने र सफलता शुरु हुने समेत विश्वास छ ।
नुन पोखिनु अशुभ
हाम्रो परंपरागत मान्यतामा नुन पोखिनु राम्रो मानिँदैन । त्यसैकारण नुन प्रयोग गर्दा सचेत भएर गर्नु पर्छ । नून पोखिनु नेपाल र भारतमा मात्र होइन युरोपेली देशमा समेत नराम्रो संकेत मानिन्छ ।
खासकुरा के हो भने प्राचिन समयमा नून दुर्लभ हुने गर्थ्यो । रोमान साम्राज्यमा सैनिकहरुलाई तलवको साटो नुन दिने गरिन्थ्यो । तलवलाई अंग्रेजीमा स्यालरी भनिन्छ जुन स्याल र सल्टको अपभ्रंस हो । त्यसैले नुन खस्नु भनेको भाग्य वा समृद्धीको पतन जस्तै मानिएको हो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, कात्तिक ३ २०७७ १९:३६:०२